Adeege Deliver | Online Shop | ALAABO TAYEYSAN, ADEEG HUFAN HADDA DALBO, HADDA HEL.
Ku soo dhawoow Adeeg Deliver, oo uu adeegeedu yahay ku iibinta baraha internetka badeecooyin kala duwan oo jaadgooni ah lana hubiyay tayadooda. Kuwaas oo laga iibsan karo bogga adeeg.net ama baarnaamjiyada teleefoonada casriga ah (Adeeg Deliver Mobile Applications).
Isticmaalka adeegyada Adeege Deliver, waxa ay ka dhigan tahay in aad aqbashay xeerarkaan:
Adeeg Deliver waxaa ka go’an ilaalinta xogtaada gaarka ah marka aad isticmaalayso adeegyada Adeeg Deliver. Si aan kuugu adeegno, waxaa loo baahan yahay in aan aruurinno misna keydinno xogtaada.
Mar walba oo aad soo gudbiso xogtaada, waxaa sharcigu na farayaa in aan xogtaas u adeegsanno si waafaqsan xeerarka caalamiga ee ku saabsan ilaalinta xogta gaarka ah, kuwaas oo uu ku jiro sharciga ilaalinta xogta guud ee General Data Protection Regulation (GDPR).
Boggaga internetka waxay wataan tilmaamo (Links) kugu sii xirayo boggag kale oo qayb sadexaad ah. Adeeg Deliver mas’uul kama aha waxa ku qoran boggagaas, isticmaalkaaga boggagaas qatarta ka iman karta mas’uul kama nihin.
Marka aad ka adeeganeyso bogga Adeeg.net, waxaa dhici karta in aad ku waydiinno xog gaar ah oo kugu saabsan. Waxaa ku jira kara magacaaga, cinwaanka emailkaaga, cinwaanka aad deggen tahay (Timlaam), telephone ama telefoonka gacanta ama taariikhda dhalashada. Isla xogtaas waxaa lagu lifaaqi karaa dalabyadaada (Orders) iyo adeegyada kale ee l xariira ah si aan raadraac ugu sameynno dalabyadaada haddii loo baahdo.
Sidaas darted marka aad isticmaaleyso boggoga Adeeg.net, waxaad Adeeg Deliver u ogolaanaysaa iyo adeegyadeeda cidda gudbisa in ay xogtas u adeegsadaan kaliya wax la xariira adeegga ay qabato Adeeg Deliver, waxaana suurta-ga ah in laguu soo diro ogeysiisyo la xariira adeegyadaas kaliya.
Adeeg Deliver waxay kaloo adeegsataa warbixin kaydiyayaasha (Cookies). Cookie waa qayb yar oo kaydisa xog ku soo saabsan xulashadaada boggaga, ogolaanaysana in boggaga ay u qaabayso si ku haboon danayntada. Waad ku hagaajin kartaa internet-kaagu in uu aqbalo dhamaan warbixin kaydiyayaasha ka yimaada Adeeg Deliver, si aad bogagga Adeeg Deliver ugu isticmaasho sida ugu habboon.
Si la mid ah, waxaan uruurinaa cinwaannada IP (IP Address). iyadoo ujeedadu tahay in la horumariyo nidaamka adeegsiga. Waxaa kaloo aan u isticmaalaynaa cinwaanka IP si aan u go’aansanno goobta aad ka soo galeyso dal (Itoobiya) iyo dibad.
Hadii aad da’ ahaan jirto 15 ka yar, fadlan soo hel fasaxa waalidkaa ama qofka mas’uulka kaa ah ka hor inta aadan adeegsan boggeena. Qatarta ka imaan karta adeegsadayaasha ka yar 15 mas’uul kama nihin.
Sidee Adeeg Deliver u adeegsan doontaa xogta ay kaa uruuriso? Adeeg Deliver oo kaliya waxay isticmaali doontaa xogtaada gaarka ah sababo dhowr ah awgood oo ay ku jiraan “ujeeddo dhinaca maamulidda adeegga ah” taasoo macnuhu yahay in Adeeg Deliver ay dhici karto in ay kula soo xiriirto arrimo ku saabsan adeeg aad isticmaashay ama dalab aad sameysay.
Waxa ay xogtaadu mar walba ahaanaysaa mid qarsoodi ah inta aan ka ahayn meelaha loo baahan yahay in aan la qarin ama sharcigu ogol yahay. Hadii aad galiso ama dirto wax aan haboonayn ama wax aan la ogolayn sharci ahaan meel ka mid ah boggeena gaar ahaan qeybta qiimeynta (Review), Aleelo waxaa dhici karta in ay xogta gaarka ah ee ay kaa hayso ay u adeegsato in ay joojiso dhaqamadaas oo kale.
Ilaa intee ayay Adeeg Deliver kaydinaysaa Xogtaada? Waxaan haynaynaa xogtaada kuu goonida ah oo ku jiraya system ilaa iyo inta ay lagama maarmaan u noqoto adeegga aad isticmaashay. Meelaha aad wax ku biiriso sida qeybta qiimeynta, waxaa dhici karta xogtaada sida guud in oo kaliya la hayo intii macquul ee loogu baahan yahay oo la xiriira sababaha markii horeba aad u soo gudbisay.
Isticmaalka adeegyada Adeeg Deliver, waxa ay ka dhigan tahay in aad aqbashay xeerarkeeda oo ay ka mid yihiin kan adeegsiga, sir dhowrka iyo habka alaab celinta, kuwaasi oo dhaqan gelaya isla marka aad isticmaasho adeegyadeenna. Haddii aadan oggoleyn dhamaan shuruudaha fadlan ha isticmaalin, waxna ha ku soo biirin adeegyadeenna.
Xog kasta oo lagu keydiyay ama lagu soo bandhigay bogga adeeg.net ama/iyo barnaamijyadeeda waa hanti maskaxeed xaquuq ahaan u dhowran Adeeg Deliver.
Adeeg Deliver waxay beddeli kartaa xeerarkaan xilli kadib, sidaa darteed waa inaad iska hubisaa xeerarka si joogto ah.
Isticmaalkaada sii socda ee adeeggeenna waxa uu ka dhigan yahay inaad aqbashay xeerarakaan waxii laga beddelay ama lagu kordhiyay ba.
Si aad u hesho macluumaad waqtiga la socota kuna saabsan siyaasadaha sir dhowridda ee Adeeg Deliver, waxaa laga heli karaa kaliya boggaan, sidoo kale kuma qasabnin in aan kula soo socodsiino haddii isbeddel aan ku sameyno adeegyadeenna.
Soo dhawoow, Adeege Deliver waxa ay higsaneysaa in ay noqoto Amazon-ta Soomaalida, ayadoo kuu suurta galinaysa in aad ka iibsato badeecooyin kala duwan oo la hubiyay tayadooda.
Address: JIGJIGA, ETHIOPIA